igbt သော induction ကြေးနီ | induction အပူစက်ထုတ်လုပ်သူ | induction အပူဖြေရှင်းချက်
igbt သော induction brazing
induction Brazing အခြေခံ
ကြေးနီ, ငွေ, brazing, သံမဏိနှင့်သံမဏိ jointing များအတွက် induction Brazing အခြေခံ, etc ။
Induction Brazing သည်အပူနှင့် filler သတ္တုကိုသတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။ အရည်ပျော်သည်နှင့်တပြိုင်နက်အူကြောင်ကြောင်အနီးကပ်သွယ်ဝိုက်သောအောက်ခံသတ္တုများ (ချိတ်တွဲလျက်ရှိသောအပိုင်းအစများ) ကိုဆံချည်မျှင်သွေးကြောများကစီးဆင်းစေသည်။ အရည်ပျော်သောအဆာသည်ခိုင်ခံ့။ ယိုစိမ့်နိုင်သည့်အဆစ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေရန်အောက်ခံသတ္တုပါးလွှာသောအလွှာနှင့်ဆက်သွယ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအပူရင်းမြစ်များကို brazing အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ induction and resistance heater များ၊ မီးဖိုများ၊ မီးဖိုများ၊ မီးရှူးတိုင်များစသည်တို့ဖြစ်သည်။ Induction brazing သည်ယင်းတို့အနက်ပထမတစ်ခုတည်းနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ အခြေခံသတ္တုများအကြားမှန်ကန်သောကွာဟမှုရှိခြင်းသည်အလွန်အရေးပါသည်။ ကြီးမားသောကွာဟချက်သည်ဆံချည်မျှင်သွေးကြောစွမ်းအားကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေနိုင်ပြီးအားနည်းသောအဆစ်များနှင့်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အပူတိုးချဲ့ခြင်းဆိုသည်မှာအခန်းတွင်း၊ အပူချိန်မဟုတ်ဘဲသတ္တုများအတွက်ကွာဟချက်များကိုတွက်ချက်ရန်ဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးအကွာအဝေးသည်ပုံမှန်အားဖြင့် ၀.၀၅ မီလီမီတာမှ ၀.၁ မီလီမီတာဖြစ်သည်။ သငျသညျ braze မီ, ကြေးနီသည်လုပ်ရတဲ့ - အခမဲ့ဖြစ်သည်။ သို့သော်အောင်မြင်သောကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ပူးပေါင်းမှုကိုသေချာစေရန်အတွက်မေးခွန်းအချို့ကိုစုံစမ်း။ ဖြေကြားသင့်သည်။ ဥပမာ - ကြေးနီအတွက်သတ္တုများသည်မည်မျှသင့်လျော်သနည်း။ တိကျသောအချိန်နှင့်အရည်အသွေးလိုအပ်ချက်များအတွက်အကောင်းဆုံးကွိုင်ဒီဇိုင်းကဘာလဲ။ ကြေးနီကို manual သို့မဟုတ်အလိုအလျောက်ဖြစ်သင့်သလဲ
DAWEI induction တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအချက်များနှင့်အခြားသော့ချက်အချက်များအားအဖြေတစ်ခုမပေးမီဖြေကြားပေးသည်။ flux အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပါဘေ့စ်များကိုများသောအားဖြင့်၎င်းတို့ကိုကြေးနီမကျော့မီ flux ဟုလူသိများသောအရည်များဖြင့်ဖုံးအုပ်ရမည်။ Flux သည်အခြေခံသတ္တုများကိုသန့်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်သည်။ ဓာတ်တိုးခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ လုံလောက်သော flux ကိုအသုံးပြုရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အရမ်းနည်းလွန်းပြီး flux ဖြစ်လာနိုင်သည်
အောက်ဆိုဒ်နှင့်ပြည့်နှက်နှင့်အခြေခံသတ္တုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်ကိုဆုံးရှုံး။ စီးဆင်းရန်အမြဲမလိုအပ်ပါ။ ဖော့စဖရပ် - ပါဝင်သော Filler
ကြေးနီသတ္တုစပ်များ၊ fluux free brazing သည်တက်ကြွသောလေထုနှင့် vacuums များနှင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့နောက် brazing ကိုထိန်းချုပ်ထားသောလေထုထဲ၌လုပ်ဆောင်ရမည်။ သတ္တုဓာတ်ဖြည့်တင်းသည့်အခါအရည်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်အစိတ်အပိုင်းမှဖယ်ထုတ်ရမည်။ အမျိုးမျိုးသောဖယ်ရှားရေးနည်းလမ်းများအသုံးပြုကြသည်, အသုံးအများဆုံးအဖြစ်ရေကိုသတ်, ချဉ်ခြင်းနှင့်ဝါယာကြိုးဖြီး။
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ Tags: မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း brazing, igbt သော induction brazing, induction Brazing အခြေခံ, သော induction brazing အပူပေးစက်, သော induction brazing ၏နိယာမ, brazing ၏သီအိုရီ
အဘယ်ကြောင့် induction Brazing ကိုရှေးခယျြ?
induction heat နည်းပညာသည်မီးများနှင့်မီးဖိုများကို brazing တွင်အသုံးပြုသောအပူအရင်းအမြစ်အဖြစ်တဖြည်းဖြည်းရွှေ့ပြောင်းပေးနေသည်။ ဒီတိုးပွားလာတဲ့လူကြိုက်များမှုကိုအဓိကအကြောင်းပြချက် ၇ ချက်ကရှင်းပြတယ်။
1 ။ Speedier ဖြေရှင်းချက်
induction အပူသည်ပွင့်လင်းသောမီးလျှံထက်စတုရန်းမီလီမီတာလျှင်စွမ်းအင်ပိုမိုသယ်ဆောင်နိုင်သည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်၊ induction သည်အခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်စဉ်များထက်တစ်နာရီပိုမိုသောအစိတ်အပိုင်းများကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။
2 ။ ပိုမိုလျင်မြန်သော throughput
Induction သည် induction အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အပိုင်းပိုင်းအစုအပုံများကိုဘေးဖယ်ထား။ သို့မဟုတ်ကြေးနီအတွက်ထုတ်ပယ်ရန်မလိုတော့ပါ။ အီလက်ထရောနစ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်စိတ်ကြိုက်ကွိုင်များသည်ကြေးနီဖြစ်စဉ်ကိုချောမွေ့သောထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်များနှင့်ပေါင်းစပ်စေပါသည်။
3 ။ တသမတ်တည်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို
induction အပူကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးပြန်လည်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်လိုချင်သော process parameters များကို induction equipment ထဲသို့ထည့်ပါ။ ၎င်းသည်အပူသံသရာများကိုသာအနည်းငယ်သာသွေဖည်ခြင်းဖြင့်ထပ်ခါထပ်ခါပြုလုပ်လိမ့်မည်။
4. ထူးခြားတဲ့ controller
မီးခိုးနှင့်အတူခက်ခဲသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤသည်နှင့်တိကျသောအပူအပူအဆစ်ဖြစ်ပေါ်စေသည့်အပူ၏အန္တရာယ်ကို minimize ။
5 ။ ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းပတ်ဝန်းကျင်
ပွင့်လင်းသောမီးတောက်များသည်မသက်မသာအလုပ်လုပ်ရသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်အော်ပရေတာ၏စိတ်ဓာတ်နှင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားသည်ဒုက္ခရောက်သည်။ သော induction အသံတိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ပတ် ၀ န်းကျင်အပူချိန်တိုးလာခြင်းမရှိသလောက်ဖြစ်သည်။
6 ။ သင့်ရဲ့အာကာသအလုပ်ထားပါ
DAWEI induction brazing equipment သည်ခြေရာအနည်းငယ်သာရှိသည်။ Induction station များသည်ထုတ်လုပ်မှုဆဲလ်များနှင့်ရှိပြီးသား layout များသို့အလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်သည်။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောမိုဘိုင်းစနစ်များကသင့်အားခက်ခဲသောအစိတ်အပိုင်းများကိုလုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးသည်။
7 ။ no-အဆက်အသွယ်ဖြစ်စဉ်ကို
induction သည်အခြေခံသတ္ထုများမှအပူကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည်အဆက်အသွယ်မရှိသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ အောက်ခြေသတ္တုများသည်မီးတောက်နှင့်ထိတွေ့ခြင်းမရှိပါ။ ၎င်းသည်အောက်ခြေသတ္တုများကိုအတိုင်မှကာကွယ်ပေးခြင်းဖြင့်အထွက်နှုန်းနှင့်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကိုမြင့်တက်စေသည်။
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ Tags: သော induction brazing ၏အားသာချက်, brazing သော induction, မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းသော induction brazing, igbt သော induction brazing, RF သော induction brazing, brazing သာ. ကောင်း၏အဘယ်ကြောင့်, အဘယ်ကြောင့် induction Brazing ကိုရှေးခယျြ?